बाढीले विद्युत उत्पादन बन्द, २० करोड बराबर क्षति भएको अनुमान – Clickmandu
बाढीले विद्युत उत्पादन बन्द, २० करोड बराबर क्षति भएको अनुमान
क्लिकमान्डु २०७६ असार २४ गते १६:४३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका–५ मार्मिङस्थित चाकुखोला विद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पु¥याएपछि विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ ।
शनिबार राति आएको बाढीले क्षति पु¥याएपछि ६ दशमलव ५ मेगावाटको सो आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको हो । लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल प्रालिद्वारा निर्माण गरिएको सो आयोजनाबाट उत्पादित ६ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । त्यसलाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन करीब तीन महीना लाग्ने आयोजनाका व्यवस्थापक सागरमान सिहले जानकारी दिए ।
आयोजनाको हेडवक्र्स, इन्टेक, ट्रान्समिसन, टेलरेस विद्युत गृह लगायतमा लेदो पसेर क्षति पुगेकाले २० करोड मूल्य बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान रहेको आयोजनाले जनाएको छ । प्राविधिक टोलीले निरीक्षण गरेपछि मात्र क्षतिको यथार्थ विवरण प्राप्त हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी २२ दशमलव १ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ आयोजनामा रु एक अर्ब ५० करोड मूल्य बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको शिवश्री हाइड्रो पावरका कार्यकारी निर्देशक उमेश कसजुले बताए । पहिरोले खोला थुनिएपछि आएको बाढीले विद्युत गृह र मेशिनलाई क्षति पु¥याएको छ । यसै महीनाको अन्त्यमा परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको मर्मत गर्न करीब ६ महीना लाग्ने कार्यकारी निर्देशक कसजुले बताए ।
बाढीले आयोजनाभन्दा तल रहेको अरनिको राजमार्गको चाकुबजारस्थित चाकुखोलाको पक्की पुल मुनी ठूलाठूला ढुङ्गा थुपारेर दाँयाबाँया कटान गरेपछि वरिपारी रहेको चाकु बजार उच्च जोखिममा परेको छ । बस्ती जोगाउन स्काभेटरले ढुङ्गा पन्छाइ बस्तीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने काम भइरहेको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
बाढीले माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनाको चाकुबजार र झ्यालेभीरमा रहेको दुईवटा प्रशारण लाइनको टावरसमेत ढालेको छ । रासस
एनआरएनसँग मिलेर गाँउपालिकाले ४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने
ऊर्जाका आयोजनाले पाए सबैभन्दा बढी वनको जग्गा, कसले कति पाए (तथ्यांकसहित)
प्राधिकरणबाट थानीले दिए राजीनामा, के होला पुनरावलोकन समितिको भविष्य ?
कुलमान सर दाङका यी जनताको गुनासो पनि एकपटक सुन्ने कि ?
कुलमानको नीतिः राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार, नराम्रो गर्नेलाई सजाय